Dinika:Fanjakan'i Madagasikara - Wikipedia
Salama Tompoko. Boky ve ilay "Teny Fikasan'Andriamanitra" sa nofinofin'i Ampanjakamasinantany? Raha boky ilay izy dia mba maniry ny tenako hahalala ny mombamomba azy toy ny fanao amin'ireo pejy hafa na amin'ny Wikipedia tsy malagasy. --Thelezifor (resaka) 21 Septambra 2017 à 23:07 (UTC)
Tokony hisy fanovana ny lohatenin'ity pejy ity[hanova ny fango]
Salama. Tokony hisy fanovana ny lohatenin'ity pejy ity satria tsy historika tahaka ireo pejy amin'ny teny frantsay sy anglisy sns izay nampifandrohizina aminy. --Thelezifor (resaka) 21 Septambra 2017 à 23:18 (UTC)
Salama. Marina tokoa izany, sahala tantara nofinofisana ilay izy fa tsy dia misy fifandraisana amin'izay voalazan'ny boky momba ny Fanjakan'i Madagasikara. — Jagwargrr... mailaka 25 Septambra 2017 à 20:00 (UTC)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinika:Fanjakan%27i_Madagasikara&oldid=808298"
Voaova farany tamin'ny 25 Septambra 2017 amin'ny 20:00 ity pejy ity.